I-Chalet enegadi kwiiPyrenees - I-Airbnb
I-Chalet enegadi kwiiPyrenees
Roquefort-de-Sault, Occitanie, France
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguCora BELVILLA
UCora BELVILLA unezimvo eziyi-82 zezinye iindawo.
Eli khaya leeholide ezithandekayo liseRoquefort-de-Sault, phakathi kokuzola kunye nokuzola. Ilungele usapho oluncinci okanye iqela elijonge phambili kwiholide eFransi, indawo yokuhlala inamagumbi okulala ama-2 kwiindwendwe ezi-4. Eli khaya leholide linegadi enefenitshala yokuba ukonwabele ubusuku obuthandekayo bebarbecue.
Iivenkile kunye neeresityu jikelele e-Axat zikumgama we-12 km. Ichibi likwi-1 km ukusuka ekhaya, lenza indawo efanelekileyo kubathandi bendalo.
Ikhitshi elivulekileyo langoku limiselwe ngokugqibeleleyo ukulungiselela izidlo ozikhethayo. Ungayonwabela iglasi yewayini kwi-terrace efikelelekayo kuwe. I-WiFi yasimahla inikezelwe ukonwabela. Ubuninzi bezilwanyana zasekhaya ezi-2 zinokuhlaliswa kwipropati.
Isikhululo seenqwelomoya sasePerpignan sikumgama oziikhilomitha ezingama-79.
Ukungena kuqala ngo-4-6 PM kwaye jonga ukuphuma ku-8-10 AM.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (ikhitshi elivulekileyo (ikhitshi elivulekileyo (i-4 isitovu seringi, igesi), isitya sokuhlamba izitya, ifriji-isikhenkcezisi, umatshini wokuhlamba), Indawo yokuhlala/igumbi lokutyela, igumbi lokulala (ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokulala (2x ibhedi eyodwa), igumbi lokuhlambela (ibhafu eneshawari , isitya sokuhlambela, indlu yangasese))
iterrace(14 m2), igadi(150 m2), ifenitshala yegadi, BBQ(amalahle)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Roquefort-de-Sault